Idphoto4you wuxuu yareeyaa cabirka sawirada Passport-ka internetka | War gadget
Adiga oo aan lacag qarash gareeyn, waxaad si sahal ah u goosan kartaa sawirada cabbirka baasaboorka oo ku saleysan liisaska dalka iyo sawirrada inta sawirka la tifaftirayo. Waxaad sidoo kale ku geyn kartaa sawirka sawir baasaaboor ah fiiso ama habab kale oo kasta oo aad ku daabacan karto sawirada baasaaboor ee guriga. Waxaas oo dhan waxay ku mahadsan yihiin abuurista sawirro baaxad weyn oo baasaboor ah oo internetka ah IDphoto4You.com taas oo sahlaysa shaqada dad badan.
Idphoto4you, waa codsi shabakad fudud oo internetka ah oo kuu oggolaanaya inaad sameysid sawirro baasaboor leh xaddiga cabbirka saxda ah iyo khadka tooska ah adigoon lacag bixin. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa kamarad dijitaal ah, waxaad qaadataa sawirka, waad soo dhigaysaa ka dibna raac tallaabooyinka adeegga Idphoto4you si aad u hesho sawir nooca baasaboorka ah.
1 Sida looga qaado sawirrada cabbirka baasaboorka kamarad dijital ah
2 Cabirka sawirka baasaboorka Spain
3 Sawirka DNI iyo baasaboorka miyaa isku mid ah?
4 Shuruudaha sawirka baasaboorka ee Spain
5 Sida loogu beddelo sawirka cabbirka baasaboorka khadka tooska ah (waxaad ka hadli kartaa barnaamijyada ama bogagga internetka)
Sida looga qaado sawirrada cabbirka baasaboorka kamarad dijital ah
Halkan waxaa ku yaal tilmaam fudud, waa inaad leedahay asal cad oo aad uga tagtaa meel ku filan madaxa si aad u goosato sawirka Sidoo kale iska hubi inaadan wax hadh ah ku lahayn wajigaaga ama asalkaaga, sidoo kale u isticmaal kamaradda isla joogga madaxaaga.
Ha u degin soo degsashada barnaamijkan kaa caawin doona inaad liis yeelato sawirkaaga baasaboorka, oo leh cabirka saxda ah ee nidaamkan sharci.
Cabirka sawirka baasaboorka Spain
Sawirada baasaboorka Spain waa inay had iyo jeer buuxiyaan shuruudo taxane ah, oo aan hoos uga hadli doono. In kastoo midka ugu muhiimsan waa cabirka sawirka la sheegay. Sidaad u badan tahay inaad horeyba u ogayd, markaan tagno meel aan sawirro ka qaadno, mashiin ama sawir-qaade, waa in la caddeeyaa markasta in sawirradan loogu talagalay baasaboorka. Maaddaama ay leeyihiin cabbir gaar ah.
Marka laga hadlayo Isbaanishka, sida ay tilmaamtay dowladda lafteeda, cabirka sawirradan waa inay u dhexeeyaan 35 ilaa 40mm ballaaran oo saami ahaan aad u sarreeya, taasi waa, inta udhaxeysa 40 ilaa 53 mm. Lama aqbali karo waqti kasta in sawirradu ka yar yihiin tan. Intaas waxaa sii dheer, iyaga dhexdooda, madaxa iyo qeybta kore ee jirku waa inay qabsadaan inta udhaxeysa 70 ilaa 80% sawirka.
Sawirka DNI iyo baasaboorka miyaa isku mid ah?
Xaalado badan, waxaa jira dad kuwaas waxay ku isticmaaleen isla sawirada labada dukumiinti. Waxay u badan tahay inaad isku sawir ku leedahay aqoonsigaaga iyo baasaboorkaaga, markaa mabda 'ahaan waa suurtagal. Xaqiiqdu waxay tahay inay wax badan ku tiirsan tahay kiis kasta, tan iyo markii la cusbooneysiinayo DNI, sawir cusub ayaa had iyo jeer la codsadaa, kaas oo ka duwan kii hore. Haddii aad cusbooneysiisay DNI ka dibna aad cusbooneysiineyso baasaboorka, waxay u badan tahay inay kuu oggolaanayaan inaad isticmaasho sawirka DNI. Laakiin maahan wax dhaca kiisaska oo dhan.
Marka laga hadlayo sawirrada aqoonsiga, waxaa badanaa la ogaadaa in cabbirkaas waa inuu lahaadaa waa 32 26 milimitir. Tani waa waxa lagu muujiyay bogga rasmiga ah ee Wasaaradda. Taasi waa sababta ay had iyo jeer uga yar yihiin kuwa baasaboorka. Laakiin waxaa jira waqtiyo markii sawir aan u isticmaalnay DNI ay noo oggolaadaan inaan cusbooneysiino baasaboorka.
Shuruudaha sawirka baasaboorka ee Spain
Sidii aan horay u soo sheegnay, sawirka baasaboorka badanaa wuxuu leeyahay shuruudo qaar marka laga hadlayo Spain. Haddii shuruudahaan la buuxin waayo, sawirka lama isticmaali karo lamana aqbali doono. Kuwani waa dhinacyada aasaasiga ah, laakiin waxaa muhiim ah in loo hoggaansamo xaalad kasta, si looga fogaado dhibaatooyinka sawir la sheegay. Maxaa lagaa doonayaa inaad fuliso?
Sawirkii ugu dambeeyay: Kama badnaan karo 6 bilood
Madaxa iyo qaybta kore ee jirku waa inay qabsadaan inta u dhexeysa 70 ilaa 80% sawirka
Asalka waa inuu ahaadaa mid cad oo labis ah
Sawirka waa inuu ahaadaa midab oo udub dhexaad u ah
Waa in lagu daabacaa waraaqda tayada sawirka leh
Qofku waa inuu ka tagaa isagoo toos u fiirinaya kamaradda
Indhaha waa inay furnaadaan oo haddii muraayadaha la isticmaalo waa in laga sameeyaa muraayad saafi ah
Sawirada leh koofiyad, koofiyad, garbasaar ama visor lama aqbali karo
Xaaladda xirashada xijaabka, waa inaad awood u leedahay inaad si muuqata u aragto wejigaaga xaalad kasta
Sawirada dhallaanka ah ee ay tahay in lagu qaado madaxa, lama arki karo gacmo qabanaya madaxa
Sida loogu beddelo sawirka cabbirka baasaboorka khadka tooska ah (waxaad ka hadli kartaa barnaamijyada ama bogagga internetka)
Haddii aad horey u laheyd sawir, laakiin uusan kujirin qaabkii loo baahnaa, waan ku sharxi karnaa beddelkiisa. Si aan haddaba u haysanno sawir la jaan qaadaya waxa ay baasaboorka nagu weydiinayaan. Tan awgeed, waxaan u isticmaali karnaa bogagga ama barnaamijyada, kuwaas oo naga caawinaya inaan wax ka beddelno cabirka. Waxaa jira ikhtiyaarro badan, sida xitaa isticmaalka aaladaha sida Rinjiga ay ku caawin karaan, haddii aan horey u ogaanay cabbiraadaha loo adeegsado sawirka la sheegay.
Mid ka mid ah xulashooyinka ugu dhameystiran waa Visafoto, inaad ku booqan karto xiriiriyahan. Degelkan waxaa suurtogal ah in lagu abuuro sawirro baasaboorro, aqoonsi ama fiisooyin dalal badan. Marka waxay si fudud ula qabsaneysaa wax kasta oo aan raadineyno macnahaas. Kaliya waa inaan soo rarnaa sawir, oo xitaa yeelan kara taariikh. Thanks to websaydhkan waxaan u rogi karnaa sawirka sawirka saxda ah ee baasaboorka.
Haddii waxa aad raadineysay uu ahaa barnaamij loogu talagalay Android, waxaa kale oo jira ikhtiyaarro la heli karo. Waxaan haynaa barnaamij la yiraahdo Tafatiraha Aqoonsiga Baasaboorka, kaas oo aan ugu samayn karno sawirro aqoonsi ama baasaboor qaab fudud. Abka waa fududahay in la isticmaalo, kaliya waa inaad sawir gelisaa oo aad tafatirtaa. Si bilaash ah ayaad uga soo dejisan kartaa barnaamijka hoose ee Android:
Tifatiraha sawirka Aqoonsiga ee baasaboor iyo fiiso
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Idphoto4you wuxuu yareeyaa cabirka sawirada Passport-ka khadka tooska ah
Waad ku mahadsan tahay maqaalka. Waxaan raadinayay meesha aan sawiro kaga qaadayo dukumiintiyada inta lagu jiro masaafada bulshada. Talooyinkiisa, wuxuu adeegsaday sawir Visa ah. Hada laga bilaabo, marwalba waxaan ku qaadi doonaa sawirradan khadka tooska ah oo keliya, waa mid aad u habboon!
Jawaab Natán Saavedra